Mareykanka oo Sheegay Inuu Dilay 100 Al-Shabaab Ah Iyo Sh/Abu Muscab oo Beeniyay. – Shabakadda Amiirnuur
Mareykanka oo Sheegay Inuu Dilay 100 Al-Shabaab Ah Iyo Sh/Abu Muscab oo Beeniyay.
November 21, 2017 6:36 pm by admin Views: 452
War kasoo baxay Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday deegaan katirsan gobolka Bay lagu dilay in kabadan 100 dagaalyahan oo katirsan Xarakada Al Shabaab.
Intaasi kadib Xarakada Al-Shabaab ayaa dhankeeda gaashaanka u daruurtay war maanta ka soo baxay taliska ciidamada military-ga Mareykanka ee Africa oo ahaa in duqeyn xagga cirka ah oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen in ka badan 100 askari oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab.
Sheykh Cabdi Casiis Abuu Muscab, Afhayeenka ciidanka ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo la hadlay Idaacadda Andalus ayaa beeniyey hadalka ka soo yeeray dowlada Mareykanka ee ah in ay beegsadeen Mucaskar ay Mujaahidiintu leeyihiin, kuna dileen in ka badan 100 askari.
“Warka ka soo yeeray dowlada saliibiyada Mareykanka waa been aan sal iyo raad midna lahayn. Ma jirto wax duqeyn ah oo lagu beegsaday Mucaskaraatka Mujaahidiinta, mana jiro xitaa hal Mujaahid oo ay beegsadeen diyaaradaha Mareykanka” ayuu yiri Sh. Abuu Cabdi Casiis Abuu Muscab.
Sheykh Abuu Muscab ayaa sheegashada dowlada Mareykanka ku tilmaamay mid lagu daboolayo fashilkii iyo guuldarooyinkii amni ee Mareykanka iyo xulifadiisa ka soo gaaray hardanka ka socda Soomaaliya si gaar ah caasimadda oo dhawaan Mareykanka uu muwaadiniintiisa ku amray in ay isaga baxaan.
Taliska ciidamada Military-ga Mareykanka Africa ee loo yaqaano AFRICOM ayaa war saxaafadeed uu maanta soo saaray ku sheegay in ay duqeyn xagga cirka ah ka fuliyeen deegaan qiyaas ahaantii 125 mile u jira magaalada Muqdisho ayna halkaas ku dileen in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey kordhiyey duqeymaha xagga cirka ah ee uu ka fulinayo Soomaaliya, waxaana uu inta badan beegsanayey bartilmaameedyo aanan sugneyn iyo kuwa uu shaki ku jiro taas oo mararka qaar keeneysay in qasaare uu soo gaaro dadka shacabka ah.
Duqeyntii ugu dambeysay ee diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen Sh/hoose waxay ahayd mid lagu beegsaday ugu yaraan saddex ruux oo beeraley ah oo diyaaradaha Mareykanku ay u maleeyeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Inkastoo hadda ay sheegayaan in gantaallo dhowr ay ku beegsadeen Mucaskar ay leeyihiin dagaalyahanada A-Shabaab, taliska ciidanka ee Xarakadana uu beeniyey sheegashadaas waxaanan ilaa hadda la ogeyn haddii duqeyntaas ay beegsatay dad shacab ah iyo haddii ay beegsatay xeryo laga guuray.
Dowladda Mareykanka gaar ahaan Taliska AFRICOM ayaa bilihii dambe umuuqday kuwa qaaday dhabbihii madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ee ahaa sheegashada beenta ah, bishian NOV,2017 ayay Mareykanku sheegteen dhowr iyo toban weerar oo ay leeyihiin waxaan ku dilnay Boqolaal dagaalyahanno Al Shabaab ah.